Ahoana ny fomba hametahana anarana amin'ny tananao amin'ny tetikasanao | Asa tanana
Ahoana ny fomba fanaovana amboradara anarana amin'ny tanana mba hahafahana mampiavaka ny tetikasanao
Marian monleon | | asa-tanana, Asa-tanana amin'ny lamba
Manao ahoana daholo!!!. Tsy fantatro raha hitranga aminao toa ahy fa tiako ny manavaka ireo zavatra vita amin'ny lamba amin'ny alàlan'ny fametrahana ny anarana, na ao anaty sakaosy sakaosy, ao anaty kitapo fidiovana, ao anaty Baiboly ho an'ny sekoly, ka afaka nanohy nanoratra zavatra tsy misy farany aho. ..
Anio dia hasehoko anao hoe inona ilay rafitra ampiasaiko amboradara anarana amin'ny tanana izay antenaiko fa tena ilaina tokoa amboary ny tetik'asa fanjairanao.
Ny fitaovana izay ilaintsika dia tsotra sy tsotra amin'ny zaitra, azo antoka fa hanana izany ao an-trano ianao:
Mifampitohy (Amin'ilay miraikitra amin'ny lafiny iray).
Kofehy fanaovana amboradara (Nampiasa kofehy egyptiana 5gr aho).
Fanjaitra (Tokony ho matavy vao afaka mandalo ilay kofehy).
Pensilihazo na mari-pamantarana an'ireo voafafa amin'ny alàlan'ny fametahana hafanana.
Mba hanaovana ilay anarana dia vitako izany freehand, saingy afaka misafidy ny hanonta azy ianao ianao ary manoritra azy amin'ny lamba izay alehan'ny anaranao voaravaka.
Nanapaka izahay ny sombin'ny lamba sy interlining izay hampiasaintsika.
Mametaka hafanana izahay mba hiarahan'ny roa tonta.
Manisy marika ny anarana izahay eo amin'ny lamba.
(Azonao atao ihany koa ny manintona ny anarana eo amin'ny lamba aloha, mba hanapahana izay ilainao, na ataovy mivantana amin'ilay zavatra hampiasainao manokana)
Tonga izao ny fotoana hanaovana peta-kofehy, hazavaiko aminao amin'ireo dingana efatra ireo:
Nandalo ny fanjaitra izahay avy any ambadiky ny lamba (4).
La mampiditra indray amin'ny alàlan'io tranonkala io ihany izahay ary manome zaitra mitazona ny kofehy isika araka ny hita eo amin'ny sary (5).
Averinay ilay dingana teo aloha ihany, ka mijanona ho endrika rojo.
Manaraka ny mariky ny taratasy izahay ary rehefa tonga any amin'ny farany isika dia mitazona ny teboka farany amin'ny alàlan'ny famindrana ny fanjaitra amin'ny ilan'ny lamba.
Izahay ihany no mahavita afatory amin'ny lafiny ratsy amin'ny lamba, satria tsy hita io ampahany io. Ary noho izany dia manana ny taratasy misy peta-kofehy sy ny tanjonay manokana izahay.
Manantena aho fa tianao ity asa tanana ity Ary ampiharinao amin'ny fampiharana izany, azoko antoka fa amin'ny tetikasanareo sasany dia tena ilaina izany. Efa fantatrao fa afaka mizara azy ianao, manome ny toy izany amin'ireo sary masina etsy ambony, maneho hevitra ary manontania izay tadiavinao, satria faly izahay mamaly ny fanontanianao. Mandrapihaona amin'ny DIY manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » Asa-tanana sy fitaovana » Asa-tanana amin'ny lamba » Ahoana ny fomba fanaovana amboradara anarana amin'ny tanana mba hahafahana mampiavaka ny tetikasanao
Manamboatra ny sisin'ny jeans